၁၃:၃၆၊ ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၃၃၈၃ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
၀၃:၅၇၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၃:၃၆၊ ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
| [[ပါတိတ်အဲမလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း]] | [[ကွာလာလမ်ပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်|ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ]]
* ၁၉၇၈ခုနှစ် မတ် ၂၅တွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ ထွက်ခွါလာသော Fokker F-27 Friendship 200အမျိုးအစား လေယာဉ် XY-ADKသည် ထွက်ခွာပြီးမကြာမီ လယ်ကွင်းထဲပျက်ကျခဲ့ကာ လေယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည် ၄၈ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့သည်။<ref>"Accident description". Aviation Safety Network. Retrieved 13 March 2016.</ref>
* ၁၉၉၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၇တွင် [[မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း|မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း]]ပိုင် Fokker F27လေယာဉ်သည် ရန်ကုန်မှ ထွက်ခွာနေစဉ် တိမ်းမှောက်ကာ လေယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည် ၄၈ဦးအနက် ၁၆ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
* ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၉တွင် [[ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်]]၏ အကြံပေး နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာရှေ့နေ [[ဦးကိုနီ]]သည် လေဆိပ်ဂိတ်နံပါတ် ၆ အပြင်၌ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
* ၂၀၁၉ခုနှစ် မေ ၈တွင် Biman ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်အမှတ် ၆၀သည် ဒါကာမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာလာရာ အဆင်းတွင် ပြေးလမ်းချော်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်မှူး၊လက်ထောက်လေယာဉ်မှူး နှင့် ခရီးသည်များအပါအဝင် ၃၃ဦး အသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်။<ref>"Biman Airlines Plane Skids Off Runway in Yangon, Myanmar". The New York Times. 8 May 2019. Retrieved 8 May 2019.</ref>
* ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ် ၂တွင် မန္တလေးမှ ရန်ကုန်သို့ထွက်ခွာလာသော [[ရွှေမြန်မာလေကြောင်းလိုင်း]]ပိုင် လေယာဉ် Y5-506 ATR-72-600လေယာဉ်သည် [[ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်]]ပြေးလမ်းသို့ ဆင်းသက်စဉ် ရှေ့ဘီးအဆင်းဂီယာကျိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ထိုအဖြစ်အပျက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိခဲ့ပါ။<ref>"Yangon airport runway closed temporarily afteraplane nose wheel breaks". Mizzima News.9August 2019. Retrieved 11 August 2019.</ref>
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/531604" မှ ရယူရန်